व्हीलचेयर का निर्माण
चेक आउट मा - अब तपाइँ PayPal को साथ4मा तिर्न सक्नुहुन्छ
केवल छनौट गर्नुहोस् पछि तिर्नुहोस् अनलाइन स्टोर को लाखौं मा चेकआउट मा र4मा तपाइँको भुक्तानी विभाजित - एक हरेक दुई हप्ता। यो ब्याज मुक्त छ, तपाइँको क्रेडिट स्कोर मा कुनै प्रभाव छैन र PayPal द्वारा समर्थित छ।*
4 मा भुक्तानी के हो?
4 मा तिर्नुहोस् एक सुविधा हो कि तपाइँ तपाइँको भुक्तानी लाई4भुक्तानी मा विभाजित गर्न सक्नुहुन्छ, तल भुक्तानी लेनदेन को समय मा देय र3पछिको भुक्तानी प्रत्येक2हप्ता पछि गरीएको संग।
के म ४ मा पे को उपयोग गर्न सक्षम हुनेछु?
हामी हाम्रो अमेरिकी ग्राहकहरु को एक बढ्दो संख्या को लागी4मा वेतन प्रदान गरीरहेका छौं। उपलब्धता तपाइँको निवास को राज्य मा निर्भर गर्दछ र तपाइँ कम्तिमा १ years बर्ष को उमेर (वा तपाइँको राज्य मा बहुमत को उमेर) लागू गर्न को लागी हुनु पर्छ। तपाइँ पनि राम्रो स्थिति मा एक पेपाल खाता हुनु पर्छ वा एक पेपैल खाता खोल्न को लागी आवेदन गर्न को लागी।
4 मा भुक्तानी केहि व्यापारीहरु र सामानहरु को लागी उपलब्ध छैन। यदि तपाइँ4मा तिर्नुहोस् तपाइँको भुक्तानी विधि को रूप मा जब तपाइँ PayPal को साथ बाहिर जाँच गर्नुहोस्, तपाइँ आवेदन प्रक्रिया को माध्यम बाट लिईनेछ। तपाइँ तुरुन्तै एक निर्णय पाउनुहुनेछ तर सबैलाई हाम्रो आन्तरिक जाँचको आधारमा अनुमोदित गरिनेछैन।
म कसरी4मा भुक्तानी संग तिर्न सक्छु?
जब तपाइँ अनलाइन पसल गर्नुहुन्छ र यदि यो एक योग्य लेनदेन हो, केवल PayPal को साथ तिर्न को लागी छनौट गर्नुहोस्, तपाइँ उपलब्ध भुक्तानी विधिहरु मध्ये एक को रूप मा ४ मा भुक्तानी देख्नुहुनेछ। केवल एक केहि चरणहरु मा4योजना मा एक भुक्तानी को लागी आवेदन, एक तत्काल निर्णय प्राप्त, र बाहिर जाँच समाप्त।
कुन खरिद रकम4मा भुक्तानी को लागी योग्य छ?
तपाइँ $4देखि $ 30 को बीच योग्य किनमेल कार्ट मूल्यहरु को लागी 1,500 मा भुक्तानी को उपयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
4 योजना मा मेरो वेतन को लागी नियम र शर्तहरु के हुन्?
तपाइँ तपाइँको आवेदन पेश गर्नु अघि4योजना मा तपाइँको वेतन को agreementण सम्झौता पढ्नु पर्छ। तपाइँ चेकआउट मा4मा भुक्तानी को लागी आवेदन छनौट गर्दा theण सम्झौता को लागी लिंक देख्नुहुनेछ। तपाइँसँग theण सम्झौता डाउनलोड गर्ने विकल्प पनि हुनेछ।
एक पटक तपाइँको योजना शुरू हुन्छ, हामी तपाइँलाई तपाइँको Payण सम्झौता कसरी पत्ता लगाउने सहित4योजना मा तपाइँको भुक्तानी को बारे मा महत्वपूर्ण जानकारी सहित एक ईमेल पठाउनेछौं।
त्यहाँ4मा वेतन संग सम्बन्धित कुनै शुल्क छ?
त्यहाँ4मा वेतन संग तिर्न छनौट को लागी कुनै शुल्क छैन, तर यदि तपाइँ एक भुक्तानी संग ढिलो गरीरहनुभएको छ तपाइँ एक ढिलो शुल्क चार्ज हुन सक्छ।
मेरो योजना4मा कति समय सम्म रहन्छ?
तपाइँको व्यक्तिगत योजना कूल मा weeks हप्ता भन्दा थोरै अन्तिम हुनेछ। डाउन पेमेन्ट लेनदेन को समयमा देय हुनेछ र ३ पछिको भुक्तानी प्रत्येक १५ दिन पछि लिइनेछ।
मँ4मा पे संग कहाँ तिर्न सक्छु?
4 मा भुक्तान चयन गरिएका व्यापारीहरु जहाँ पेपाल स्वीकार गरीएको छ मा प्रयोग गर्न को लागी उपलब्ध छ। लेनदेन सबै मुद्राहरुमा गर्न सकिन्छ कि PayPal समर्थन गर्दछ, न केवल USD। USD मा लेनदेन को लागी, PayPal ले स्वचालित रूप बाट USD ले चेकआउट मा लेनदेन को राशि रूपान्तरण गर्न को लागी तपाइँ4योजना मा तपाइँको भुक्तानी प्रदान गर्नु अघि। मुद्रा रूपान्तरण शुल्क तपाइँको मा बाहिर सेट को रूप मा लागू हुनेछ PayPal प्रयोगकर्ता सम्झौता.
कुनै ब्याज पाउनुहोस् यदि $6वा अधिक को खरिद मा months महिना मा पूरा मा भुक्तानी जब तपाइँ PayPal क्रेडिट संग जाँच गर्नुहोस्।
ब्याज ब्याज तिर्नु पर्ने छ यदि तपाइँको ब्यालेन्स प्रोमोशनल अवधिको भित्र पूर्ण रूपमा भुक्तान गरिएको छैन भने खरिद मिति बाट। न्यूनतम मासिक भुक्तानी आवश्यक छ।
क्रेडिट अनुमोदनको विषय।
"कर्मन हेल्थकेयर व्हीलचेयर नवाचार को राष्ट्र को अग्रणी निर्माता हो"
Karman व्हीलचेयर को एक पूरा लाइन प्रदान गर्दछ, हिंड्नेहरू, रोलेटर, पावर व्हीलचेयर र स्कूटर, स्ट्यान्ड-अप व्हीलचेयर, अक्सिजन नियामक, बाथरूम सुरक्षा र अन्य घर हेरचाह उत्पादनहरु।
Karman हेल्थकेयर उत्पादनहरु को बारे मा
म्यानुअल र पावर व्हीलचेयर
At कर्मा®, हामी १०० भन्दा बढी मोडेल, प्रकार, व्हीलचेयर को विविधताहरु बाट छनौट गर्न को लागी छ। हामी को एक ठूलो चयन छ मैन्युअल व्हीलचेयरसहित यातायात व्हीलचेयर, मानक व्हीलचेयर, हल्का व्हीलचेयर, अल्ट्रा हल्का व्हीलचेयर, Ergonomic व्हीलचेयर र अधिक। एक श्रेणी, मोडेल, रंग वा यहाँ सम्म कि मूल्य बिन्दु को छनौट अन्तिम प्रयोगकर्ता को लागी "कला को राज्य" लाई पूर्ण रूपमा सराहना गर्न को लागी महत्वपूर्ण छ। गतिशीलता उत्पादनहरु। हाम्रो पेटेंट जाँच गर्न नबिर्सनुहोस् S-ERGO एस आकार आसन प्रणाली. हामी तपाइँ आराम मा तपाइँको जीवनकाल को उपयोग को लागी एक उत्तम कुर्सी खोज्न प्रतिबद्ध छौं, गतिशीलता र प्रतिस्पर्धी विकल्प। हामी मा कर्मान® यहाँ छन् र तपाइँको हरेक आवश्यकता को लागी समर्पित छन्। हामी पनि प्रस्ताव स्थायी व्हीलचेयर मा प्रस्ताव को उच्चतम स्तर को लागी हाम्रो उत्पादन मिश्रण बन्द गतिशीलता व्हीलचेयर वर्ग।
दैनिक र हिड्ने सहयोग
कर्मान हेल्थकेयर® उत्पादनहरु एक कुल उत्पादन को पेशकश कि बेड, सामान, नुहाउने, को साथ लामो समय सम्म हेरचाह बजार को सेवा। गतिशीलता, श्वासप्रश्वास, डायलिसिस कुर्सी, बिरामीको हेरचाह, स्थानान्तरण र यातायात उपकरण। सेवा उद्योग मा आफ्नो पहुँच को विस्तार, लामो अवधिको हेरचाह समूह कार्यक्रमहरु कि भित्री डिजाइन मा ध्यान केन्द्रित को एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान गर्दछ, चोट कमी र सुविधा अनुपालन।
उत्कृष्टता को माध्यम बाट गतिशीलता
ह्वीलचेयर निर्माण र डिजाइनमा 20 वर्ष भन्दा बढी प्रगतिको लागि गतिशीलता उत्पादनहरु, Karman® नवीनता र उच्च मा नेतृत्व गर्न जारी छ गुणस्तर उत्पादनहरु र बेजोड मूल्य। हाम्रो आदर्श वाक्य, "उत्कृष्टता को माध्यम बाट गतिशीलता" यसको मतलब छ कि हामी टिकाऊ, स्टाइलिश, र उल्लेखनीय आरामदायक व्हीलचेयर को हाम्रो उत्पादन लाइन को माध्यम बाट हाम्रा ग्राहकहरु लाई सन्तुष्टि ल्याउन मा एक्सेल। समर्पित हाम्रो अवतरण पृष्ठ भ्रमण गर्न नबिर्सनुहोस् Ergonomic व्हीलचेयर र मेमोरी फोम कुशन अधिकतम आराम सुनिश्चित गर्न।